Vaovao - Nisokatra ny 1st Novambra ny Expo kolontsaina ara-pananahana nasionaly (Guangzhou) roa ambin'ny folo, vokatra ho an'ny olon-dehibe ary vokatra ho an'ny fahasalamana.
Tamin'ny 1 Novambra, nosokafana tamim-pahibemaso tao amin'ny Ivontoerana Convention and Exhibition International an'ny Pazhou Nanfeng Iraisam-pirenena iraika amby roapolo (Guangzhou) kolontsaina momba ny firaisana, vokatra ho an'ny olon-dehibe ary vokatra ho an'ny fahasalamana. Ny fotoana fampirantiana dia ny 1-3 Novambra. Ity fivoriana ity dia natao tao anatin'ny toe-javatra tsara nampihatra ny fahasalamam-pirenena, ary ny lohahevitra dia ny hoe "Ny tanora salama sy ny fiadanam-po".
Raha ampitahaina amin'ny fampirantiana teo aloha, ny fampirantiana tamin'ity taona ity dia nanitatra ny toerana anaovany azy, nanitatra ny endriny, nanasongadina zava-baovao kokoa, ary manome toerana bebe kokoa. Ny toerana lehibe dia manana velaran-tany 20 000 metatra toradroa, ary ny toeran'ny sampana dia 3.000 metatra toradroa amin'ny tsenan'ny vokatra Guangdong ho an'ny olon-dehibe. Izy io dia mifantoka amin'ny fanavaozana sy ny fanovana isan-karazany amin'ny fandaminana ny tetikasa sy ny fametrahana ny faritra fampirantiana. Tranoben'ny trano fisakafoanana manokana, famolavolana jiro miloko, ary endrika vaovao. Ny endrika traikefa hita maso dia hamelombelona ny mpanatrika.
Fotoana fandefasana: Apr-15-2020
Silibratera Vibrator, Vibrator klitoraly, vibrator bitro, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy, Vibrator G-Spot, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ho an'ny olon-dehibe,